Sell On Shop Myanmar
Please choose desired category Fashion Electronics Food and Beverage Events Others
Number of products .... 1-10 11-50 51-100 100 and above
Thanks for register with us and we will get back to you soon!
Please choose desired category.. Fashion Electronics Food and Beverage Events Others
Number of products.... 1-10 11-50 51-100 100 and above
အဆင့် ၁ : စာရင်းသွင်းရန်
သင်ရဲု့လုပ်ငန်းကိုကို စာရင်းသွင်းပြီး ရောင်းချလိုတဲ့ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းကို ပြုစုထားပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှ သင့်အားဆက်သွယ်လာပြီး အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ အကူအညီ အားလုံးကို ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရဲ့အွန်လိုင်းစီးပွားရေးကို ဘယ်လိုစတင်ရမယ်ဆိုတာကို အခမဲ့သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ပုံ၊ ကတ်တလောက် အစရှိသည်တို့ကို လျင်မြန်စွာပြီးစီးအောင် အပြည့်အဝ အကူအညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် ၂ : မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှ အော်ဒါများလက်ခံရောင်းချပါ
သင်ရောင်းချလိုတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို စာရင်းပြုစုပြီးတာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားက ဝယ်ယူသူများဆီကို စတင်ရောင်းချနိုင်ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ ရောင်းချသူအသုံးပြုဆော့ဖ်ဝဲနဲ့ မိုဘိုင်းAPP တို့မှတဆင့် အော်ဒါလက်ခံခြင်း၊ ပေးပို့ရန်စီစဉ်ခြင်းတို့ကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဆင့် ၃ : ထုတ်ပိုး ပို့ဆောင်ပါ
အော်ဒါများလက်ခံရရှိပြီးတာနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းများကိုထုတ်ပိုးပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့အကူအညီနဲ့ ဝယ်ယူသူများဆီပို့ဆောင်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ထုတ်ပိုးခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းတာဝန်တို့ကို ကျွန်တော်တို့ဆီလွှဲအပ်ခြင်းအားဖြင့်လည်း သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းစီးပွားရေးကို စိတ်စိုးရိမ်သောကမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အဆင့် ၄ : ရောင်းချငွေရယူပြီး စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်လိုက်ပါ
သင့်ရဲ့အော်ဒါတွေ ပေးပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးပြီးဆုံးတာနဲ့ ရောင်းချရငွေများကို လျင်မြန်စိတ်ချရတဲ့ ငွေပေးချေမှုစနစ်နဲ့ ရယူလိုက်ပါ။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံငွေ၊ စပေါ်ငွေများ ကုန်ကျခြင်းမရှိဘဲ သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ချဲ့ထွင်နိုင်ပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးမားဆုံး အွန်လိုင်းရှော့ပင်းမော်လ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Shop.com.mm မှ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတဝှမ်းမှ ဈေးဝယ်သူတွေကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ ဈေးဝယ်နိုင်စေရန် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားပေါင်းများစွာကို မှန်ကန်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ တစ်နေရာထဲမှာ စုစည်းရောင်းချလျက်ရှိတဲ့ အွန်လိုင်းရှော့ပင်းမောလ်တစ်ခုပါ။
Shop.com.mm မှာဆိုရင် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်း၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း၊ ဖက်ရှင်ပစ္စည်းနဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း စတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်းများစွာ ရောင်းချလျက်ရှိပြီး အိမ်အရောက်ငွေချေစနစ်ကို အဓိကအသုံးပြုတာကြောင့် ဈေးဝယ်သူတွေကို ပိုမိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိမိဝယ်ယူထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ချို့ယွင်းချက်တစ်စုံတစ်ခုရှိပါက ၇ ရက်အတွင်း ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ရှိပါတယ်။ Shop.com.mm ဟာဆိုရင် Rocket Internet နဲ့ Asia Pacific Internet Group (APACIG) ရဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကနေ စတင်ကာ ကုမ္ပဏီဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။